“वडाका साथै गाउँपालिका नै समृद्ध बनाउँछु”– अध्यक्ष बिष्ट - Gokarna News
“वडाका साथै गाउँपालिका नै समृद्ध बनाउँछु”– अध्यक्ष बिष्ट
आइतबार, माघ २०, २०७५ by Gokarna News
भुवन बहादुर सिंह/बझाङ
– अनिल विष्ट (थलारा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष)
वडा अध्यक्षको रुपमा जनप्रनिधि भएर आउनु भएको छ, वडाको बिकास का लागि के कस्ता योजनाहरु अगाडी सार्नु भएको छ ?
वडाको विकासका लागि मुलत पर्यटनको लागि बढी जोड दिएका छौ । त्यसका साथ साथै अन्य भौतिक निर्माणका कुरा पनि छन्, उद्यमशिलताका कुुरा पनि छन् । यसका साथै आर्य आर्जनका कुरा लगायत वडाको सर्वाङगिक विकासका लागि बिभिन्न खाले योजना अगाडी सारेका छौ । कोहि योजना एक बर्षको सम्पन्न हुने खालका योजना छन् भने कोहि ठुला क्रमागत जाने खाले योजना छन् । यी योजनालाई हामीले समयमै सम्पन्न गर्न सकेमा सम्वृदशाली वडा र गाउँपालिका बनाउने लक्ष्य छ ।
तपाईका वडामा मुख्य समस्या के के छन् ?
हाम्रो वडामा भौतिक रुपमा सडक विद्यालय सिचाई कुलो पुर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । अहिले गाउँपालिका भए पछि समस्यालाई कम गर्न लागि परेका छौ । पाँच बर्षको मेरो कार्यकालमा वडा भित्र र गाउँपालिका भित्र रहेको समस्या सँग जुधेर उक्त समस्याहरुको समाधान गरी विकासको बाटोमा लैजान सदैब तत्पर रहने छु ।
अहिले खानेपानी ,बिद्युत, संञ्चार, यातायातको तपाईको वडाको अवस्था कस्तो छ ?
खानेपानीको सवालमा गाउँपालिका र ग्रामिण जलश्रोत परियोजनाले काम गदै आएको छ । यसका साथै खानेपानी सञ्चालन गर्न प्रकिया अगाडि बढाईरहेको छु । साथै एक घर एक धाराको अवधारणा पनि मैलै मेरो वडामा सञ्चालन गरेको छु । संञ्चारको कुरामा पनि मेरो वडामा पहिला थिएन् ,त्यसैले मेरै वडा अन्र्तगत पर्ने जामकोट डाँडामा नेपाल टेलिकमको टावर निर्माणका लागि गाउँ कार्यपालिका वैठक वाट निर्णय गरी टावर निर्माण गर्ने निर्णय पारित गरिसकेका छु । यातायातको सवालमा हाम्रो गाउँपालिका अन्र्तगत धैरे वडाका साथै यस वडामा पनि सडक निर्माण भईरहेको छ । साथै छुटेका वस्ती हरुलाई पनि शाखा सडक निर्माणका लागि आवस्यक पहल गरिरहेको छु । अबको केहि समय भित्र मेरो वडावासीलाई भएका समस्या समधान गर्नका लागि दिन, रात नभनि लागि परेको छु ।
वडामा रहेका विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्नका लागि तपाई सँग के–कस्ता योजनाहरु रहेका छन् ?
हाम्रो वडामा रहेका विभिन्न खाले समस्याहरु लाई समाधान गर्नका लागि गुरुयोजन अनुसार पाँच बर्ष भित्र वडाका मात्र समस्या नभएर गाउँपालिका भरिका सबै खाले समस्यालाई समाधान गर्नका लागि म मात्र नभई गाउँपालिकाको पुरै टिम नै लागि परेका छौ । गाउँपालिकाको गुरुयोजनाभित्र रहेर टोल वडा लगाएत गाउँपालिका भित्र रहेका सबै खाले समस्याको अन्त्य गर्नका लागि गाउँपालिकाको टिम नै लागि रहेका छौ ।
तपाईको वडालाई गाउँपालिकाकै नमूना वडा बनाउनको लागि के–कस्ता कामहरु गर्दै हुनु हन्छ ?
समृद्ध समाजको निमार्ण र वेरोजगारीको अन्त्य गर्ने, टोल,टोल वस्ती वस्तीमा सहकारीको अवधारणा ल्याएको छु । वडाका सबै टोलमा मोटर बाटो पुगाउने लक्ष्यका साथ काम गदै आएको छु, स्कुल जान बाट कोहि पनि बालबालिका छुटने छनैन्, शिक्षालाई ब्यवसायिक बनाउनको लागि प्राविधिक शिक्षाको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छु । साथै समग्र रुपमा भन्नुपर्दा वडाका साथै गाउँपालिका नै नमुना गाउँपालिका हुनेछ ।
तपाई युवा नेता पनि भएकोले बेरोजगार युवाको लागि वडाबाट कस्ता योजना ल्याउने सोच बनाउनु भएको छ ?
हाम्रो थलारा गाउँपालिकाको समग्र विकासको लागि सर्बप्रथम हजारौ विदेश जाने युवाहरुलाई स्वरोजगारको अबस्था सिर्जना गरी आफ्नै गाउँपालिकामा कृषि पशुपालन तरकारी खेति गरी गाउँ गाउँमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याई वेरोजगारी हटाउन लागि पर्नेछु । विकास निर्माणका लागि साना उद्योग सञ्चालनमा ल्याई भष्टचार गर्ने मान्छेलाई कानुनको दायरामा ल्याई यूवा साथिहरुलाई लागु औषध तथा पिय पद्धार्थ वाट टाढा राख्न समय समयमा जनचेतना मुलक गोष्ठी गरी प्रशिक्षण गरेर सम्पुर्ण गाउँपालिकाको विकास हुने काममा अग्रसर गराउने छु ।
तपाईको वडामा कृषिको सम्भावना कतिको छ ? कृषिमा लाग्ने युवाको लागि तपाईले के योजना बनाउनु भएको छ ?
मेरो वडा गाउपालिका भरिनै सबै भन्दा बढी कृर्षिजन्य खाद्यान्न उत्पादन गर्ने सक्ने खालको हावापानि र माटो भएको हुदा कृषीमा लाग्ने यूवाहरुको लागि विभिन्न किसीमका सम्ह बनाई माटोको पहिचान गरी ठाउँ अनुसार कृषिको विउविजनको ब्यबस्था गरी सोही अनुसारको तालिम दिलाई कृर्षक हरुलाई आवश्यक पर्ने कृषी सामाग्री खरिद गरी निशुल्क वितरण गर्न योजना बनाएको छु ।
तपाई राजनितिमा किन लाग्नु भएको हो ?
राजनीति भनेकै सामाजको बिकास र समाज लाई सम्बृदिको बाटोमा लैजाने माध्यम नै राजनीति हो, त्यसैले मेरो वडा र थलारा गाउँपालिकाको बिकास
गर्न हेतुले म राजनीतिमा आएको हु ।
चुनौतीहरु चाँही के–के देख्नु भएको छ ? जस्तो तपाईले गर्न खोजेको काममा समस्याहरु आउन सक्छन ति समस्या के देख्नु भएको छ ?
प्रथम चुनौती भनेको समाज हो जहाँ विभिन्न किसिकका विकृति र विसंगति रहेका छन् । जस्तै हामी लाई सवै भन्दा वाधकको विषय भनेको सुदूरपश्चिमको ७ नं प्रदेशमा एकदमै समस्याको रुपमा मदिरा र जुवा हो जसले समाज लाई अगाडी वढाउन बाधकको रुपमा रहेको छ । त्यसैगरी १० वर्षीय दन्द्धको वेला कुनै कसैको कानुनमा नचल्ने गरी आफ्नै स्वविवेकले चल्यो । कानुन कार्यन्वयन सञ्चान गर्ने साथिहरुले पनि गतिलो ढंगले कार्यन्वयन गर्न सकेनन् र धेरै उदारवादी भयो । यस कारणले पनि समाज अगाडी बढ्न सकेन । त्यसै गरी हामीले विभिन्न किसिमका योजना तर्जुमा गर्दा सडक खन्दा होस अथवा अन्य काममा होस दक्ष इन्जिनियर छैन । यसो हुनुपनि एक किसिकको चुनौतीको विषय रहेको छ । प्रशासनिक निकायमा काम गर्ने मान्छेहरु पनि नयाँ सोच र विचारका छैनन् । यिनिहरु वाट जति कामको अपेक्षा गरेका हुन्छौ त्यति काम पनि गर्न सक्दिैनौ । समाजमा यस्ता खालका थुपै चुनौतीहरु रहेका छन् । ती चुनौतीहरु लाई छिचोल्दै अगाडी बढि रहेका छौ ।
अन्तमा मैलै भन्न छुटाएको र जनतालाई तपाईले भन्न मन लागेको केहि छ भने बताईदिनुहोस न !
मलाई ६ नं वडा वासी आमावुवा, दाजुभाईको सेवा गर्न अवसर दिलाउनु भएकोमा सवैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । जसरी मलाई आफ्नो अमुल्य मत दिएर विजय गराउनुभएको छ र यो स्थान सम्म पुर्याउनु भयो । म हृदय देखी नै वडा वासी लाई केही समस्या भएको खण्डमा म चौविसै घण्टा सेवामा हाजिर हुने सोचका साथ अगाडी वढि रहेको छु ।